HAWEENAY WAJI CUSUB LOO SAMEEYEY KA DI MARKII QAYB WAJIGEEDA KA TIRSAN UU BURBURAY SAWIRO | Toggaherer's Weblog
CINJIR GALMOOD RAASHIN LAGA DHIGAY (CONDOM)
HAWEENAY WAJI CUSUB LOO SAMEEYEY KA DI MARKII QAYB WAJIGEEDA KA TIRSAN UU BURBURAY SAWIRO
Posted by: toggaherer on: May 7, 2009
Hooyo u dhalatay dalkaasi mareykanka ayaa dhaqaatiir wadankaasi u dhashay ay ku guuleysteen inay u talalaaan waji cusub ka dib makii dhaawac ka soo gaaray xabad uu ku dhuftay ninkeeda ay wajigeda ku weysay.
Dhaqaatiirta aayaa waji cusub u sameeyay haweeneysan oo lagu magacaabo Connie Clup waana waji talaalkii u horeeyay ee mareykanka laga fuliyo inta la ogyahay, waxaana haweyneydan oo sida sawirka aad ka aragtaan ay ka bur burtay sanka ilaa iyo daamaaha qeybo ka mid ah.
” Waxaan u maleynayaa inaan ahay qofka aad halkan u timaadeen” ayuu ku tiri haweyneydaasi suxufiyiintaa isugu yimid xarun caafimaad oo ku taala cleveland halkaasoo ah halkii uu ka dhacay qaliinkii wajiga cusub lagu sameeyay.
Ninkeeda oo lagu magacaabo Thomas ayaa 2004tii wajiga ka toogtaya ka dib istoogtay inkastoo uu ka badbaaday hadana waxaa lagu xukumay 7 sanno oo xarig ah, waxaana haweynedaa markii hore ay ku nooleeyd nolol cariiri ah iydaoo tube ku neefsan jirtay
Waxay wariyaasha u sheegtay in dhaqtarkii howshani sameeyay uu iyada markii hore u sheegay inuusan hubin inuu ku guuleysan karo barnaamijkani lakiin uu inta karaankiisa ah dadaali doono. waxaan qaliinkii lagu smaeeyay iyada uu qaatay 22 saacadood.
Inay rashiin cunto waxaa haweyneydani ugu horeysay bishii janaayo ka dib markii wajiga cusub loo sameeyay lakiinse wxii xiligaasi ka danbeeyay saxaafada looma ogoleyn inkastoo goor dhow saxaafada loo soo bandhigay muuqaalka haweyneydani.
Saciid Maxamed Cali
Nilia, NS, Malaysia.